ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ် Tony Moly ရဲ့ ကွာလတီမြင့် မျက်နှာသစ်ဆေးတွေအကြောင်း (with discount) – YANGON STYLE
ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ် Tony Moly ရဲ့ ကွာလတီမြင့် မျက်နှာသစ်ဆေးတွေအကြောင်း (with discount)
မျက်နှာမှာ အဆီကြိတ်နဲ့ ၀က်ခြံတွေထွက်လာတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းတွေထဲက တစ်ခုက သေသေချာချာ မျက်နှာကိုဆေးကြောခြင်းမရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အသားအ​ရေ Careလုပ်တဲ့​နေရာမှာ Cleansing ​လေး​တွေလဲ မရှိမဖြစ်​နော်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ Tony Moly ရဲ့နာမည်ကြီ: မျက်နှာသစ်ဆေးတွေကို တစ်ပေါင်းတည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နာမည်ကျော် အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်တာနဲ့အညီ သဘာ၀ပစ္စည်းတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် အသားအရေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ သူ့မှာ မျက်နှာသစ်ပြီးလဲ အသား​အ​ရေ​လေး စို​နေ​စေတဲ့ မျက်နှာသစ်​လေး​တွေလဲ ရှိသလို လျှော့စျေးတွေလည်းရှိတာကြောင့် တစ်ခုချင်းစီထောက်ပြီးကြည့်ပေးပါဦးနော်။
မူလတန်ဖိုး ၁၁,၅၀၀ကျပ်မှ ၈၈၀၀ကျပ်အထိ လျှော့ချထားတဲ့ Clean dew foam cleanser 180ml
ရေဓာတ် 96% ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို အစိုဓာတ် ဖြည့်တင်းပေးအားကောင်းပြီး စိုပြည်လှပ စေပါတယ်။ Soothing effect ပါဝင်တာကြောင့် sensitiveဖြစ်တဲ့ အသားအရေကို ပြန်လည် အနားယူစေပါတယ်။
Vitamin ပေါင်းစုံနဲ့ Mineral ဓာတ်များ
ပါဝင်တာကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ အသားအရေကို အားဖြည့်ပေးပြီး နူးညံ့ချောမွတ်စေပါတယ်။
Vitamin ဓာတ်တွေအများအပြားပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို ဝင်းလဲ့ကြည်လင်တောက်ပစေပါတယ်
Vitamin C အများအပြားပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို ကျန်းမာပြီး တင်းရင်းနုပျိုစေပါတယ်
ဆေးစွမ်းထက် Acerola berry့ အစွမ်းဖြင့် အသားအရေကို ကျန်းမာပြီး စိုပြည်ကြည်လင်တောက်ပစေပါတယ်
Ferment snail foam cleanser 150ml (Original Price- 32,000Ks / Discounted Price – 19,900Ks
Snail Slime ပါဝင်တဲ့ အသားအရေ အနက်ရှိုင်းဆုံးအထိ သန့်စင်ပေးတဲ့ အသားအရေကိုပါ စိုပြည်နူးညံ့စေတဲ့ Ferment Snail Foam Cleanser လေးပါနော်
Gold 24K snail foam cleanser(150ml) (Original Price- 33,000Ks / Discounted Price – 19,000Ks)
24K ရွှေနဲ့ Snail Slimeပါဝင်တဲ့ အမြှုပ်ထွက်အားကောင်းပြီး အသားအရေ အနက်ရှိုင်းဆုံးအထိ သန့်စင်ပေးတဲ့ အသားအရေကိုပါ စိုပြည်နူးညံ့စေတဲ့ 24K Snail Foam Cleanser လေးပါ
TONY LAB AC Control foam cleanser 150ml ) (Original Price- 19,500Ks / Discounted Price – 14,000Ks)
ဝက်ခြံ၊ အဆီဖုနဲ့ sensitive အသားအရေ ပြဿနာတွေအတွက် Tony Lab AC Control foam cleanser ​လေးပါ​နော်!
The chok chok green tea foam cleanser 150ml (Original Price- 15,500Ks / Discounted Price – 11,000Ks)
ရေဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့ အသားအရေ​လေးဖြစ်ဖို့ အတွက် Green tea foam cleanser​လေး​နော်! Sensitive skin လည်း သုံးလို့ ​ကောင်းပါတယ်…
Bio ex cell peptide foam cleanser 150ml(Original Price- 35,000Ks / Discounted Price – 26,000Ks)
အသားအ​ရေကို တင်းရင်း စိုပြည်​စေတဲ့ peptide ပါဝင်တဲ့ foam cleanser ​လေးပါ​နော်
အရည်အသွေးကောင်းပြီး တန်ဖိုးမြင့် ကိုရီယားမျက်နှာသစ်ဆေးကို တန်ဖိုးသက်သာစွာနဲ့ရနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးက Tony Moly မှာသာရှိပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်ကလည်းမှာယူနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့ Tony Moly ဆိုင်ခွဲတိုင်းမှာလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ https://www.facebook.com/Tonymoly.mm မှာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။